Must Listen to OMN! Babal’achuu WBO Taayyee Danda’aatu ragaa ba’aa jira! | Kichuu
Babal’achuu WBO Taayyee Danda’aatu ragaa ba’aa jira!
Har’a #WBOn_goolee_Oromiyaa keessaa bakka maraa jira!!!
Ilmaan OPDO, egamtoonni Wayyaannee duraanii, #reeffaa_Minilki dhiqtuun ammaa kanneen akka #Taayyee , Shimallis Abdiisaa, Birhaanuu har’a ciniinsuu keessaa jiru. Dhukkuubbiin ciniinsuu akkam akka ulfaatu hadholii fi Ogeessotta fayyaa gaafadha. Har’a Taayyeen ilmi OPDO kan afaan faagga ilmaan Nafxanyaa faarsaa ilmaan Oromoo irratti duulaa jira. Jaallatee miti. Ciniinsuurra jira. Waan qabu waan gadhiisu dhabeetu waanuma hunda ciniina deema. Ofis ormas ciniinaa deema. Tayyeen ni maraata jedheen ture. Dhugaadha , Tayyeen ni maraata. Amma kunoo jalqabeera. Ololan WBO irratti oofa jedhee dhugaa abbaan Haqaa (WBOn) qabu Oromoof ragaa baheera. WBOn badeera jedhamu suni har’a DARAAREE lixa OROMIYAA hamma BAHA Oromiyaatti lalisuu isaa Tayyeen ragaa nuuf dhiyeessaa jira. Nuhi galtuun akka Tayyee dhugaa WBOn qabu dubbattees dhiistes nu hin ajaa’ibu. Kan nu dinqee dhibuu dhiise dhugaa fi soba isa inni dargaggummaa hamma dullumaatti waliin laaqu sanadha. Namni kuni yoo bilchaataa? isa jedhudha!
Taayyee Danda’aa ABO abaaree, dhaaba Nafxanyaa faarsa. ABO halagoomsee, dhaaba ilmaan minilki bilxiginnaa faarsa. Taayyeen Jaal #Daawud_Ibsaa abaaraa #Minilikiin faarsa. Kana seenaaf ol kaawwaadha. Oromoon kana dagachuun sarummaa saree gadiitti. Oromoon dhiirummaa qabaatte ammoo kuni xiiqiif lafaa isa kaasuu danda’uu qaba.
Taayee danda’aa , Birhaanuu Juulaa , Shimallis Abdiisaa fi Abiy Ahime wal harkaa fuudhanii #WBO_abaaraa turan. Ammas ittuma jiru. “WBOn shiftaadha, waraana shanee, ergamtuu Wayyaanee” jechuun afaan isaaniin UDAAN HAGAA jiru. Dhugaan shirtu garuu kan #wayyaaneef_waggaa_27_guutuu gugguufee ergame Abiy Ahimed Shimallis Abdiisaa, fi Birhaanu Juulaa (hattuu Daakuu)dha.
Jarri kuni waggaa lama guutuu WBO balleessineerra jechaa ba’anii har’a as galagalanii “WBOn shaggar keessaa humna addaa keenya nu harkatti fixe jedhu”. Sobanii dadhanbanii yeroo muddaman otoo hin beekiin cinqamanii dhugaa dubbatu. “shifataan shanee Oromiyaa keessaa ari’amee gammoojjii biyyoota ollaatti galchineerra jechaa daqiiqaa otoo hin guutiin Shiftaan shanee Burrayyuu keessaatti namoota “nagaa ” ajjeesa jedhu. “Shiftaan shanee Wallaagaa fi Gujii keessaa qofaa jira jechaa as galagalanii #shiftaa_shanee_Harargee keessaa sochootu irratti tarkaanfii laalessaa fudhanne jedhu” . Dhugaa afaan qaban funyaaniin dubbatti jedhan itti taate.
Gabaabumatti , har’a #WBOn_goolee_Oromiyaa keessaa bakka maraa jira!!! Oromoon duris waa’ee jiraachuu WBO amanuun mataa dhukkubbii itti tahe baayyeedha. Warreen akka kana waggoota dheeraa itti iyyinee dadhabne. Warreen akkasii bira darbineerraa. Har’a lafarraatti qabatamaan #Godinni_WBOn keessaa hin sochoone tokkoo hin jiru. Guutummaa Wallaggaa, Guutummaa Gujii, Boorana, Walloo, I/Abbaa Booraa, Buunnoo Baddallee, Jimmaa A/Jifaar, Guutummaa Lixa Shaggaar, Kaaba Shaggar, kibba Lixa Shaggar, Baha Shaggar, Harargee , Baalee fi Arsii WBOn abbaa itti taheera. Guutummaa Oromiyaa dhuunfachuunis yeroo gabaabaa keessaatti itti deemama.
Dhumarratti, waggaa lama dura Oromoon dhimma WBO irratti wal dura dhaabbatee wal lolaa ture. Walitti dallannee turre. Garee lamatti hiramnee wal nyaachaa turre. Godinoonni xawalwaalloota ijoollee OPDOn bitatte jala seene WBOtti duulaa ture har’a dhugaa jirtu hubateera jedheen amana. WBOn gaachana Oromoo fi Oromiyaa ta’uu isaa hojiin agarsiiseera. WBOn taayitaaf akka xawalwaallotaa OPDO jala kaata otoo hin taane Walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Oromiyaa mirkaneessuuf akka tahe ifaadha. Gareen xawalwaallotta kaleessaa WBO irraa qawwee hiikkachisuuf fiigaa turan , warreen OPDO suphanii Oromoo salphisan har’a ofumaa salphatan. Kanaaf Oromon guutummaa addunyaa irra jiru , keessaa fi alaan wal tumsee WBO hidhachiisuun dirqama. WBOn meeshaa muraasa qabuun diina irraa qawwee hiikkatee daraan guutummaa Oromiyaa harka yeroo galfataa jirutti namni ani Oromoodha ofiin jedhu WBO waliin hiriiruun humna waraanaa Oromiyaa ijaarrachuuf dirqama mataa isaa bahachuu qaba.
WBOn akka Coqorsaa lalisaa jira, WBOn akka Handoodee Kormaa bonaafi ganna lalisaa jira, WBOn akka biqilaa burqituu bishaanii irra dhaabatee lalisaa jira!
WBOn diina itti duulaa jiru ofirraa ittisuu qofaa otoo hin taanee bakka qubsuma diina dhaqee dhukkee irraa kaasaa jira. WBOn guyyaan adii magaalota seenee gantuu fi basaastuu harkaan qabee bahaa jira. WBOn diinaa adabee harkaan qabee meeshaa irraa hiikkachaa jira. Kanaaf Tokkummaan WBO waliin dhaabachuun dirqama.
Abbaan haqaa ABO/WBOdha!!
ABO/WBOn haa lalisu!
Gantuu lafti Oromiyaa hin baatiin!!
OMN: Waraana Naannoo Tigraayii fi Egeree Oromoo (Sad 8, 2020)
Waamicha Oromummaa Polisa Oromiyaa tahe Polisa Federaalaa keessa namni hidhattanii jirta Qeerro fii WBO wajjiin tahaa Meshaa keessan Nafxanyatti gara galfadhaa karaan isin baasu kana qofa
AGM: Oduu Hatattamaa/ Odeessi Obbo Shimallis Abdiisaa Angoo Irraa Kaafame Jedhu Hagam Dhugaadha?
Dhaamsa hatattamaa uummata keenya (Oromoo)Godinaalee Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Matakkal jirtan maraaf WBOZoonii Lixaa Oromiyaa Cibra Odaa Bulluq irraa darbe
Yeroo ammaa kanatti abdiifi gaachanni saba keenyaa, WBOn, diina saba keenyaa kan taate sirna nafxanyaa isa gabroomsitee jirtu yeroo tokkichaa fi isa dhumaaf duula Oromiyaa keessa qulqulleessee dhabamsiisuu eegalee jira. Haalumaa kanaan abdiifi gaachanni ummata Oromoo ,WBOn, Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin ta’uun hojiiwwan
1. caasaa mootummaa Shiftaa Abiyyoot gandaa hanga oli jiruu diiguu
2. Humni shiftaa hidhatee uummata hiraarsu bakka argamtutti rukuchuu
3. Caasaan ofiin of bulchuu ummataa ifatti diriirsuutti bobba’ee jira.
Kanuma milkeessuuf sa’aa ammaa kanatti lolli dhaabbataan bakkeewwan hedduutti eegalee jira. Akka fakkeenyaatti Godina H/G/Wallagga anaa Jaartee Jaardagaa fi aanaa Amuruu keessatt caasaan gandaa saddeet kan diigamee yommuu ta’u, Gidina Wallagga Bahaa keessatti caasaan gandoota 11 guutummaatti kan diigameefi aanaa Haroo Limmuu keessatti lolli dhaabbataan sa’aa ammaa kanatti gaggeeffamaa jira.
Kanaaf, ummanni keenyi sochii godhu kamiyyuu of eeggannoon akka raawwatuufi odeessa fi waan qabu maraan gaachana isaa kana ta’e WBO cinaa akka dhaabbatu dhaamsa keenya dabarsina.
Itti bahinsa lola kanaas waluma duraa duubaan kan isin beeksifnu ta’uu beektanii dammaqinsaan akka nu hordoftan isiniin jenna.
WBO Zoonii Oromiyaa Lixaa,
Cibraa Odaa Bulluq!